Weeraradii argagixiso ee ugu xumaa ee ay geystaan shakhsiyad xagjirin & argagixiso ah – SBC
Weeraradii argagixiso ee ugu xumaa ee ay geystaan shakhsiyad xagjirin & argagixiso ah
Posted by editor on July 24, 2011 Comments
Wadanka Norway waxaa Jimcadii 22 July 2011 ka dhacay weeraro argagixiso oo uu ka dambeeyey sida lagu eedeeyeynayo nin xagjir kirishtaan ah oo mowqifkiisu fog yahay, wuxuu diley 94 qof oo u badnaa dhalinaro.
Hadaba qoraalkan waxaan ku soo qaadaneynaa weeraradan caynkan ah oo ay geystaan dadka la midka ah ninka argagixisada ah.
Sanadkii 1982-dii wadanka Kuuriyada Koonfureed magaalo ku taal oo lagu magacaabo Sang-Namdo nin ka mid ahaa saraakiisha ciidamada Booliiska oo lagu magacaabi jirey Woo Bum Kong ayaa inta qamri iska dharjiyey wuxuu qaatey qori darandoori u dhaca & bambo waxaana uu si arxan daran u laayey 57 qof, waxaana uu dhaawacay 38 kale isagoo markii dambe is qarxiyey.
Sanadkii 1987 nin lagu magacaabi jirey Michael Ryan, oo 27 sano jir ah ayaa magaalo ku taal England oo lagu magacaabo Hungerford, wuxuu la dhex qaaday qori isagoo aragti u diley qof kasta oo ka soo horbaxa wuxuu unuunka ka jarey 16 qof 11 kalena wuu dhaawacay, isaguna markii dambe ayuu is toogtey.
Sanadkii 1989 nin beeraley ah oo u dhashay Faransiiska ayaa inta qori dafey wuxuu toogtey 14 qof oo ay ku jiraan qoyskiisii tuulada Luxiol ee dalka Faransiiska oo ku taal xuduuda wadankaasi uu la leeyahay dalka Swiss, ninkaasi Booliiska ayaa qabtey ka dib markii ay dhaawaceen.
Bishii December sanadkii 1989 nin 25 sano jir ah oo aad u xiiseyn jirey filimaanta dagaalka gaar ahaan kuwa haweenka lagu ciqaabo wuxuu qori la dhexgalay Jaamacada Montreal ee wadanka Canada wuxuu diley 14 hablo yar yar ah isagoo markii dambena is diley.
Bishii November sanakdii 1990 tuulo lagu magacaabo Aramoana oo ku taal xeebaha wadanka New Zealand ayaa toogasho ku diley 11 qof oo isagu jira rag, dumar & caruur, waxaana isagii diley ciidamada Booliiska.
September sanakdii 1995-kii wiil yar oo 16 sano jir ah madax faluuq qabey ayaa qori inta dafey wuxuu magaalada Cuers ee dalka Faranssiiska ku diley 16 qof isagoo markii dambana is diley, waxaa la sheegay in wiilkaasi ay murmeen waalidkiis.
13-kii March1996 nin hubeysan oo lagu magacaabi jirey Thomas Hamilton ayaa isagoo qori wata wuxuu dhexgaley dugsi hoose oo ku yiil magaalada Dunblane ee gobolka Scotland ee wadanka UK waxaana uu diley 16 caruur ardey ahaa & macalinkoodii isagoo markii dambena is diley.
Bishii April 1999 Laba wiil oo 20 jir ka yar ayaa iyagoo hubaysan waxay dhexgaleen dugsiga sare ee Columbine High School ee ku yaal xaafada Littleton ee magaalada Denver ee gobolka Colorado, halkaasi oo uu ku xasuuqeen 13 ardey ah iyagoo markii dambe istoogtey iyagiina.
Laba bil ka dib weerarkii Denver oo aheyd July 1999-kii nin hubaysan ayaa wuxuu dhexgaley laba xafiis oo dulaalnimada ka shaqeyn jirey oo ku taal maagaalada Atlanta ee gobolka Georgia ee wadanka Mareykanka wuxuu halkaasi ku laayey 9 qof, wuxuu markaasi ka hor soo diley xaaskiisii iyo laba ilmood oo uu dhaley, ka dibna isaga ayaa isdaldalay.
Bishii June 20018 qof oo ka tirsanaa qoyska Boqortooyada wadanka Nepal oo ku yaal Qaarada Aasiya ayaa lagu diley qasriga boqortooyada, weerarkaasi ma aheyn mid meel kale oo ka yimid oo waa halka ay Soomaalidu ka tiraahdo “Dagaal goonyahaagu ka dhashaa”, nin lagu magacaabi jirey Dependra oo waliba iska lahaa dhaxalka Boqortooyada Nepal ayaa falkaasi ku dhaqaaqay isagoo dilay Aabihiis oo ahaa boqorka wadanka, hooyadiis, walaashiis, markii dambena isaga ayaa xabad isku dhuftey, dhaawac ayaa soo gaarey intii uu ku jirey Isbitaalka ayuu isku caleemo saarey boqorka, sida muuqata ninkaasi wuxuu u bukay in uu mar uun boqor noqdo “Boqor I dhaha” waa sheekada Soomaalida loo leynayo ee ah “Mar uun Madaxweyne i dhaha”, maalmo ka dib ayuu dhaawacii u dhintey ninkaasi, waxaase ka sii daren walaalkiis oo ka yaraa oo dhaawac ahaa ayaa isaguna u geeriyoodey dhaawicii taasi
26-kii April 2002 magaalada Erfurt ee dhacda bariga wadanka Jarmalka 19 jir Robert Steinhauser ayaa 12 macalimiin ah, xogheyntii Iskoolka, laba ardey & askari Booliis ah nafta dhaafiyey ka dib markii Iaga eryey dugsiga sare ee Gutenberg Gymnasium.
Bisii October 2002 John Muhammad & Lee Malvo ayaa toogasho argagax galisay magaalada Washington DC waxay ku laayeen 10 qof.
16-kii April 2007 Jaamacada Blacksburg ee magaalada Virginia nin hubaysan ayaa ka geystey weerarkii ugu xumaa ee toogasho ah taariikhda wadanka Mareykanka ka gadaal markii uu safmar u xasuuqay 32 qof, ugu dambeyntiina isagii uu isdiley.
Sanadkii 1989-kii xasuuq ka dhacay Iskool ku yaal magaalada Rauma oo 50 KM u jirta magaalada Turku ardey 14 jir ah ayaa ku diley laba ardey oo kale.
7-dii November sanakdii 2007-dii Pekka-Eric Auvinen oo ahaa ardey dhiganayey dugsiga caafimaadka ee Jokela High School ee ku yaal magaalada Tuusulu ee ku dhaw Helsinki caasimada Finland ayaa toogtey lix ka mid ahaa ardeydii uu wax la dhiganayey isagoo markii dambana is diley.
23-kii September 2008-dii Ardey lagu magacaabi jirey Matti Saari ayaa rasaas ooda kaga qaaday ardey wax ka baranaysay dugsi farsamada oo ku yaal magaalada Kauhajoki ee Waqooyiga Bari ee wadanka Finland wuxuu halkaasi ku laayey 9 ardey & hal nin oo ka mid ahaa shaqaalaha Iskuulka, isagoo markii dambana is diley ardeygaasi argagixisada ahaa.
11-kii Bishii March 2009-kii wiil 17 jir ah oo ku labisnaa dharka ciidamada Kumaandooska ee madow ayaa ku diley 9 ardey & sadex macalimiin ah Iskuul ku yaal duleekda magaalada Stuttgart ee wadanka Jarmalka waxaa kale oo uu hal qof mar dambe ku diley goob caafimaad, wiilkaasi oo ay israsaaseeyeen ciidamada Booliiska waxaa israsaaseyntii sidoo kale ku dhintey laba qof oo wado mareysay, laba ka mid ah Booliiska si xun ayuu u dhaawacay, isagiina waa la diley guud ahaan dhimashada mashaqadaasi argagixiso ayaa gaartey 16 qof.
2-dii bisjii June sanadkii 2010-kii nin hubaysan oo lagu magacaabi jirey Derrick Bird ayaa rasaas ooda kaga qaaday dadka tuulo yar oo lagu magacaabo Cumbria oo ka tirsan England wuxuu halkaasi ku diley 11 qof, isagoo markii dambena isagu isdiley.
30-kii bishii August 2010-kii nin hubaysan ayaa lix 7 qof ku diley magaalada Bratislava ee caasimada Slovenia, wuxuu sidoo kale dhaawacay 14 qof isagoo ugu dambeyntiina is diley.